21 May, 2020 - 00:05 2020-05-21T06:10:28+00:00 2020-05-21T00:03:56+00:00 0 Views
“Mapurisa eZimbabwe Republic Police (ZRP) ekuMacheke akasunga murume anonzi Washington Chimhanda (29) nemhosva yaari kupomerwa yekuponda hanzvadzi yake achimutema nedemo kaviri — parutivi pemusoro nepadumbu — achibva angofira ipapo,” vanodaro Insp Mwanza.
“Apo Washington akasimuka, anonzi akamira pedyo naamai nehanzvadzi yake, ndokusveerera demo raiva rakazendamiswa pamadziro pemba iro akatemesa Polite naro.”
Baba vake vakazodzoka ndokuwana mwanasikana uyu atofa ndokumhan’ara nyaya iyi kumapurisa eko zvikaita kuti Washington asungwe.
“Apo vanhu tigere kudzimba ngatisiyanei nemhirizhonga. Zvinorakidza kuti njodzi iyi ingadai yakadzivirirwa dai vakuru vaivapo ava vakatora matanho nguva iripo nekuti murume uyu akanga avimbisa kuuraya munhu. Vangadai vakatsvaga kubatsirwa nenguva kune vamwe kana kuenda kumapurisa, chionai mwana mudiki aisava nemhosva akazopondwa,” vanodaro Insp Mwanza.